Sale & Marketing Archives - Glory Assumption Space
Sales & Marketing – Male/Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Construction Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales & Marketing – Male/Female (5)Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်/သီလ၀ါမြို့နယ် ။
- တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ -English ရေးဖတ်ပြောကျွမ်းကျင်ရမည် ။ -Real Estate ပိုင်းလုပ်ရမည် ။
Sales & Marketing Staff – M/F (5) Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ရန်ကင်းမြို့ နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Travel & Tours Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ရန်ကင်းမြို့ နယ်။ Sales & Marketing Staff – M/F (5) Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ရန်ကင်းမြို့ နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၀) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - Sales & Marketing Travel & Tours ပိုင်းအတွေ့ အကြုံ (၁) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - English Basic ရရမည်။ - Ticketing ပိုင်းအတွေ့ အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223783, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales & Marketing Staff - Male (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistributionCompanyတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်။ မော်လမြိုင်မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။
Sales & Marketing Staff – Male (5) Posts/ လစာ - ၁၂၀,၀၀၀ကျပ်(အထက်)။
သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်ရှိရမည်။
Location in : Tha Htone
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistributionCompanyတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်။သထုံ မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။
Sales & Marketing Staff - Male (5)Posts
Location in : Pha - An
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistributionCompanyတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်။ဘားအံ မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။
Location in : Myeik
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistributionCompanyတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်။ မြိတ် မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။
Location in : Taung Ngu
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistributionCompanyတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်။တောင်ငူ မြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။
Sales & Marketing Staff - M/F (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော သာကေတမြို့နယ်ရှိ Entertainment Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.Sales & Marketing Staff – M/F (5) Posts /လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ~ ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / သာကေတမြို့ နယ်။ - ဘွဲ့ ရ (သို့) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။ - English4Skills ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။ - Sales & Marketing အတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။ - အပြင်သွားနိုင်ရမည်။ - သံရုံးများသို့ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223783, 09262223784, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ ) [caption id="attachment_2720" align="alignnone" width="600"] Businesspeople[/caption]
Sales & Marketing Staff – Male - (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်ရှိ အိမ်သုတ်ဆေးအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်း Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
Sales & Marketing Staff – Male - (5)Posts / လစာ-၁၈၀,၀၀၀ကျပ် / မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်
တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူ့ ဖြစ်ရပါမည်။
သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
လစာ ၁ သိန်း ၈သောင်း + % (or) intensive (or) commission
နယ်ခရီး သွားနိုင်ရမည်။(သတ်မှတ်ထားသော စားစရိတ်/ နေစားရိတ် ရှိသည်)
အလုပ်ချိန်(8:30am to 4:50pm)
Sales & Marketing Staff - Male /Female (10)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales & Marketing Staff – Male /Female (10) Posts /လစာ- ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ်/လှိုင်မြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ - Computer အနည်းငယ်သုံးနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး ) [caption id="attachment_2453" align="alignnone" width="625"] 3D jigsaw pieces with text. Part ofaseries.[/caption]
Sales & Marketing Staff - Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Japan Car Company များတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း မြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales & Marketing Staff – Female (5)Posts /လစာ- ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် /ဗဟန်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - English စကားကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောနိုင်ရမည်။ - ကားအရောင်းပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - အရောင်းပိုင်းစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Sales & Marketing Staff –Female (5)Posts / Salary – 200,000 Kyats / Bothataung Township
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Travels & Tours Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales & Marketing Staff –Female (5)Posts / Salary – 200,000 Kyats / Bothataung Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။ - English စာအနည်းငယ်ရရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်းကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales & Marketing - Male/Female (5)Posts / လစာ-၃၀၀,၀၀၀ /- ကျပ်/တာမွေကျောက်မြောင်း မြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ တလကို ၆ ရက်နားခွင့်ရှိသည်။ 1.Sales & Marketing – Male/Female (5)Posts / လစာ-၃၀၀,၀၀၀ /- ကျပ်/တာမွေကျောက်မြောင်း မြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်ရှိရမည်။ - English စာကျွမ်းကျင်ရမည်။ - တခါတရံခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။ - ဘာသာခြား company တွင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - Foreigner ဖြင့်တွဲလုပ်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ တလကို ၆ ရက်နားခွင့်ရှိသည်။ 1.Sales & Marketing – Male/Female (5)Posts / Salary – 300,000 Kyats / Kyautmyaung Townshp - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်ရှိရမည်။ - English စာကျွမ်းကျင်ရမည်။ - တခါတရံခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။ - ဘာသာခြား company တွင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - Foreigner ဖြင့်တွဲလုပ်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ [caption id="attachment_347" align="alignnone" width="900"] Online Marketing Key Can Be Blogs Websites Social Media Or Email Lists[/caption]
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Travels & Tours Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales & Marketing Staff –Female (5)Posts / Salary – 200,000 Kyats / Bothataung Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်ရှိရမည်။ - English စာအနည်းငယ်ရရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။